Ny manampahefana amin'ny fifaninanana UK dia mandefa ny fanadihadiana antitrust amin'ny Apple sy App Store | Vaovao IPhone
Efa nanadino isika, saingy talohan'ny adihevitra natomboky ny Facebook momba ny politika vaovao momba ny tsiambaratelo an'i Apple dia nisy resabe nifanaovanay tamin'i Apple sy ny App Store. Resabe satria mpandraharaha maro no niampanga ny toeran'ny Apple hametraka ny kaomisionany ho an'izay maniry ny ho eo amin'ny fitaovan'ny orinasa. Hitanay niaraka tamin'ny Lalao Epic izay nisintona Fortnite satria tsy te handoa ny Apple 30% amin'ny tombom-barotra azony izy ireo. Ary tsy ny mpamorona ihany, ny fikambanana iraisam-pirenena no nanapa-kevitra ny hanadihady ireo fomba fanao ireo manoloana ny fanairana toy izany. R izaoNy Fanjakana Mitambatra izay manomboka amin'ny Apple ... Vakio hatrany fa lazainay aminao ny antsipiriany rehetra momba an'io.
Ny fanadihadiana dia natomboky ny Fifaninanana sy ny Fahefan'ny tsena any Angletera, fanadihadiana mitovy amin'ilay nataon'ny EU ankehitriny fa tadidio fa tsy tafiditra ao aminy intsony i Angletera. Mifantoka amin'ny manadihady ny fitantanan'i Apple ny fizarana fampiharana amin'ny fitaovana iOS sy iPadOS any UK, ary ny fepetra sy fepetra mifehy ny sehatra. Ao ambadiky ny fitarainan'ny mpandrindra izay miresaka momba ny fampiharana fanoherana ny fifaninanana nataon'i Apple. Ary raha, araka ny tatitra voalohany, UK mahita antony marim-pototra mieritreritra fa mankafy toerana ampihimamba i Apple.
Ary eny marina izany tsy misy fomba "ara-dalàna" hafa hizarana ny fampiharana iOS, ary izany rehetra izany eo ambanin'ny vinavinany fa mifehy ny fampiharana i Apple amin'ny tanjona fa amin'ny farany dia manana fampiharana azo itokisana izahay mpampiasa. Mbola betsaka ny fanadihadiana sy ny fanapahana hevitra, ny marina dia izany rehetra izany Ity tsindry ity dia efa nitarika an'i Apple hampihena ny komisiona izay ampandoaviny ny mpamorona kely hatramin'ny 30% ka hatramin'ny 15%Vaovao tsara, fa ho hitantsika ny fivoarany sy ny fanovan'ny Apple ny politikany. Amin'ny farany, ny iPhone dia tsy iPhone raha tsy misy ny fampiharana azy, ary ilay orinasa ihany koa no tokony hikarakara ireo mpamorona azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Ny manampahefana amin'ny fifaninanana UK dia mandefa fanadihadiana antitrust amin'ny Apple sy ny App Store